Sale & Marketing Executive for Min Zar Ni Group of Companies | Job in Myanmar
Jobs in Myanmar, jobs in Yangon - Sales & Marketing Jobs - Sale & Marketing Executive
•	ဈေးကွက်အနေအထားကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	Target ပြည့်မှီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် Report များအားအချိန်မှီ ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	Any Graduate/ Related Certificate.
•	Age 28-30 years old.
•	Experience Related Filed in 3-years.
•	Computer, Internet & E-mail ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•	English -4-Skill အသင့်အတင့်ရရှိရမည်။
No. 4-Kha/1, Hlaing River Bank,Thaung Gyi Taung Quarter, Industrial Zone (1), Part (6),
Company Industry: Sale & Marketing Executive
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	� ...
•	Responsible for performing and controlling the full audit cycle •	Plan , organize and carry out the internal audi ...
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော လုပ်� ...
•	Flexibility, good interpersonal skills, ability to multitask, organizational skills, computer skills are essential
•	ရုံးလုပ်ငန်းနှံစပ်ကျွမ်းကျင်ရမည်။ စီမံခ� ...
•	လက်အောက်ငယ်သားများစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရမ� ...
•	Establish an internal and external Communications Strategy in Conjunction with Director/ all managers •	Use Soci ...
•	Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all position. •	Maintains org ...
•	Preparing and delivering marketing plans within key objectives. •	Planning for monthly sales and achieve the ...
•	သွက်လက်ချက်ချာသူဖြစ်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေ� ...
•	To Prepare taxable document. •	Report to Financial Controller.
•	ဈေးကွက်အနေအထားကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းဆောင� ...
•	Sale Plan/ Budget/ Strategies များရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	Market Targetပြ� ...
•	သွက်လက်တက်ကြွသူဖြစ်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေ� ...
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်� ...
•	Handle the overall functions of finance, accounting and taxation •	Responsible to manage the daily AP/AR •	Han ...
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်� ...